နိဗ္ဗာန် မြင်နိုင်ခြင်း မမြင်နိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခု .. .. | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အနာဂါတ်ဆိုင်ရာ အသိပညာဟာ ဘာလဲ? ဘာလဲ?
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32 →
ဤနေရာ၌ နိဗ္ဗာန် မြင်နိုင်ခြင်း မမြင်နိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုကို ဖော်ပြပါမည်။
ယင်းအဆုံးအဖြတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို သိမှ နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါသည်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ အကြောင်းအကျိုးဝါဒပင် ဖြစ်ပါသည် – “ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ” ဆိုသော ပါဠိစာသားက ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အကြောင်းအကျိုးဝါဒ ဖြစ်ကြောင်းသာဓက ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့သုတေသီများကပင်လျှင် – “Of things that proceed fromacause, their causes the Tathagata has told; .. .. ” စသည်ဖြင့် မှတ်ယူနားလည် ချီးကြူးကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် အကြောင်းအကျိုး ၀ါဒဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအကျိုး သိမှသာလျှင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို နားလည်နိုင်မည်။
အကြောင်းအကျိုးသိမှ ဒိဌိသေပါသည်။ အကြောင်းအကျိုးမသိလျှင် ဒိဌိမသေပါ။ ဒိဌိသေပြီးမှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင်း အကြောင်းအကျိုးမသိလျှင် ဒိဌိမသေသဖြင့် နိဗ္ဗာန်မမြင်နိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် နိဗ္ဗာန်မြင်ရန် မမြင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုသည် အကြောင်းအကျိုးကို သိခြင်း မသိခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ အကြောင်းအကျိုးသိမှသာလျှင် ဒိဌိသေ၍ ဒိဌိသေပြီးမှ ဒိဌိကိုသတ်သော အားကောင်းလျှင် မဂ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြီး ဖိုလ်ဉာဏ်သို့ကူး၍ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒိဌိသတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းအကျိုးကို အချို့ကလည်း ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို အကြောင်းအကျိုးဟု မြန်မာလို ယူပါသည်။ ထိုအခါ အကြောင်းအကျိုးသိခြင်းသည် ဒိဌိသေသည်ဟု ဆိုသဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ကလည်း အကြောင်းအကျိုးပင်ဖြစ်ရာ အကြောင်းအကျိုးသိမှသာလျှင် ဒိဌိကို သတ်ပြီးဖြစ်၍ နိဗ္ဗာန်သို့ မြင်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရန်မှာ အကြောင်းအကျိုးကို သိသောဉာဏ် တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါသည်။ ထိုဉာဏ်ကို ဒိဌိကိုသတ်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း ပဋိပတ္တိရှုဒေါင့်မှ ဖော်ပြလိုပါသည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်, ပဋိပတ္တိ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်, ပဋိပတ္တိ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်. Bookmark the permalink.